गङ्गाको सहायक नदीमा आएको जल प्रलय - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
एजेन्सी। सूर्य, वृहस्पति, शुक्र, शनि र प्लुटो ज्योतिष शास्त्र वर्णित ५ ग्रह मकर राशिमा थिए । बिहीबार ४ फेब्रुअरीका दिन बुध ग्रहले पनि यसै राशिमा प्रवेश गरेर एकै राशिमा ग्रह सङ्ख्या ६ हुन पुग्यो । ज्योतिषशास्त्रले ५ भन्दा बढी ग्रह एउटै राशिमा आउने घटनालाई विनाशकारी रूपमा चित्रित गर्छ ।
उत्तराखण्डको तिब्बती सीमाना ‘नीति पास’ को ५५०० मिटर अग्लो स्थानबाट उत्पत्ति भई बग्ने धौली गङ्गाको यात्रा पथ धेरै लामो छैन । झण्डै सय किमिपछि विष्णुप्रयागमा बद्रीनाथबाट आएको अलकनन्दामा समाहित भएपछि धौली गङ्गाको अस्तित्व विलीन हुन्छ ।
एउटा ग्लेसियर खण्डित भएर धौली गङ्गामा विगलित हुन आएकाले उत्तराखण्डको यस भेगमा यो आपत् आइलागेको हो । तपोवनमा रहेका एकजना फेसबुक मित्रले गरेको ‘फेसबुक लाइभ’मा प्रकृतिको यो ताण्डव दृश्यावली हेर्दा सोच्न बाध्य भए, के मानवीय चेष्टाले प्रकृतिलाई किंचित पनि नियन्त्रित गर्न सकिन्छ ?
सामान्यतया ग्लेसियरको निर्माण वर्षौंसम्म कुनै एक स्थानमा जम्मा भएको हिउँका कारण हुन्छ । ग्लेसियर २ प्रकारका हुन्छन् ‘अल्पाइन ग्लेसियर’ र ‘आइस सिल्ड्स ग्लेसियर’ । पहाड र हिमालयमा हुने ग्लेसियर अल्पाइन वर्गमा आउँछन । पहाडी ग्लेसियर टुट्नुका अनेक कारण हुन्छन् । जस्तो कि पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि अथवा गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्लेसियर किनारमा बढेको ‘सरफेस टेन्सन’ पनि ग्लेसियर टुट्ने कारण बन्न सक्छ । ग्लेसियरबाट हिउँका विशाल टुक्रा टुटेर बेग्लै भई उछिट्टिनुलाई ‘काल्विङ’ भनिन्छ ।
यसरी टुक्रेर अघि बढेको हिमखण्डले मार्गमा आउने नदीको जलस्तर अति तीव्र गतिले बढाइदिई नदी किनारमा पर्ने स्थानमा भीषण प्रलय ल्याउँछ । हुन त विश्वका अधिकांश नदीको उद्गमस्थल ग्लेसियर नै रहेका छन् । माथिबाट हेर्दा ग्लेसियर जमेको हिउँको थुप्रो देखिए पनि भित्रभित्र यसबाट पानीमा परिणत भई नदी बनी बग्छ । झण्डै ४० किमि लामो गौमुख ग्लेसियरको ७-८ किमि परिभ्रमण गर्दा मैले पानीका यस्ता च्यानल नजर गरेको थिए । इन्साइक्‍लोपिडिया ब्रिटानिकाका अनुसार ग्लेसियरको भित्री भागमा रहेका यस्ता थुप्रै पानीका च्यानलमा ठाउँठाउँमा ड्रेनेज ब्लाक भइदिन्छ । यसले गर्दा त्यस ठाउँमा रहेको हिउँ पग्लिने अनुपातमा वृद्धि हुन्छ । पानीले हिउँ पग्लिँदै रिक्त स्थान निर्मित हुँदै जान्छ । र, यसै प्रक्रियाले विस्तारै भित्री रूपमा रिक्त स्थान बढ्दै जाँदा ‘सरफेस टेन्सन’मा वृद्धि भई हिमखण्ड टुक्रिने परिस्थिति बन्न पुग्छ । यसलाई ‘आउटबर्स्ट फ्लड’ पनि भनिन्छ । यो पृथ्वीको प्राकृतिक चक्र नै हो ।
तर मन हो कहाँ मान्छ ? सम्झना आउँछ कृष्ण जीवनको एउटा प्रसङ्ग । कृष्ण वृन्दावन छाडी संसार डुलेँ तर फर्की वृन्दावन गएनन् । उनका बालसखा गोपिनीले सधैँ प्रेमवश उनको प्रतीक्षा गरिरहे । उनीहरु कृष्णकै प्रतीक्षामा जीवन उत्सर्ग गर्न कटिबद्ध भएको थाहा पाएर कृष्णले आफ्ना परम मित्र एवं परमज्ञानी उद्धवजीलाई आफ्नो दूत बनाई वृन्दावन पठाए । उद्धवले गोपी गोपिनीहरुलाई वैराग्य- वेदान्त र प्रभुशरण र भक्तिको मार्ग अवलम्बन गर्ने परामर्श दिँदा गोपिनी भन्छन्- ‘उधौ मन न भए दस बीस, एक थियो सो गयो श्याम संग को अराधे ईश’ । भक्तिकालका काव्य शिरोमणि सूरदासले गोपीका माध्यमबाट यी पङ्क्तिमा प्रेम, समर्पण र भक्तिभावको जुन गरिमा /महिमा स्थापित गरे त्यसका सामु सबै योग, ध्यान, जप, तप, यज्ञ, नियम, अराधन, ज्ञान फिक्का सावित हुन्छन् । परम ज्ञानी उद्धवजी निरुत्तर भई वृन्दावनबाट फर्किए ।
मन त एउटै हुन्छ । यसका प्रक्षेपण अनेको भए पनि सबै धीरजनलाई विदित छ एक समयमा मनले दुई गति गर्न सक्दैन । प्रक्षेपण समयान्तरालमा त्रिगुणमयी मायाका कारण हुन्छ । निठल्ला चिन्तनको यस निठल्ला प्रवर्तकसँग पनि मन त एउटै छ । जति ज्ञान भए पनि, जति विज्ञान पढे पनि, प्रकृति सञ्चालनका जतिसुकै ‘म्याट्रिक्स’ सँग सामीप्यता राखे पनि, जीवन -मृत्युलाई ज्ञानका दृष्टिकोणले एक समान बुझे पनि यो निठल्ला पनि आपतले, प्राकृतिक विपतले, विनाशले, पार्थिव अवसानले विचलित हुन्छ, सन्तापित हुन्छ, मर्माहित हुन्छ । संवेदनाले भरीपूर्ण हुन्छ । उत्तराखण्डको यस प्राकृतिक विपदमा परी प्राण गुमाउनेहरुप्रति हार्दिक संवेदना ।
बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलिभिजनको प्रसारणमाथि चीनमा रोक